Goethe University Frankfurt - Fianarana any Alemaina, Eoropa
fanafohezan-teny : fiaraha-mientana ifampizarana
Créé : 1914
mpianatra (eo ho eo.) : 46000
Aza adino ny iaraho midinika ny Goethe University Frankfurt
Misoratra anarana ao amin'ny Goethe University Frankfurt
Goethe University Frankfurt, napetraka teo an-tampon'ny anjerimanontolo fikarohana iraisam-pirenena, manolotra isan-karazany ny akademika fandaharana, ny vondrona samihafa ny fikarohana Institiota, ary ny fifantohana amin'ny fomba interdisciplinary sarotra ny famahana olana. Ny oniversite no atao hoe Johann Wolfgang von taorian'ny Goethe, ny Frankfurt-teraka polymath nalaza noho ny fandraisana anjara miavaka amin'ny boky sy gazety, siansa, ary ny filozofia.
naorina in 1914 amin'ny tsy miankina ny famatsiam-bola sy ny fitaomam-panahy avy amin'ny lova ny Eoropeana Marina, Goethe University miavaka toy ny asan'ny mpisava lalana "olom-pirenena 'oniversite" -ary ny tantaran' ny oniversite dia iray ny fisokafana sy ny fandraisana anjara-bahoaka.
ankehitriny, Goethe University dia iray amin'ireo oniversite tany Alemaina ihany izay tia manan-danja-bahoaka famatsiam-bola miaraka fitantanana mahaleotena sy ny fahaizana mamorona miankina fanafiana masina.
Toy ny anjerimanontolo miaraka amin'ny fanafiana masina, ny famatsiam-bola tsy fahita firy any Alemaina modely ny tontolo fianarana ambony, Gú manana fahafahana be fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana rehefa amin'ny antsipiriany ny fomba maoderina anjerimanontolo iray dia tokony ho mihazakazaka, anisan'izany ny manendry ny mpampianatra. Ny fanafiana masina izay efa miorina ho vola manokana eo amin'ny fampiroboroboana ny rivo-piainana tsara izay ny fikarohana, fianarana, mieritreritra, ary mamorona.
Toerana tany Alemaina indrindra sy ny iraisam-pirenena cosmopolitan tanàna, Misarika ny anjerimanontolo ny vatana hafa ny mpianatra sy mpikaroka avy amin'ny manerana izao tontolo izao. Mpianatra ao amin'ny Goethe soa avy amin'ny fianarana sy mipetraka any Frankfurt, ny lehibe indrindra ara-bola sy ara-barotra foiben'ny tany Eoropa-amin'ny be ny fahafahana hianatra sy ny fampiharana miteny alemà. ankehitriny, Frankfurt no ratedamong-tampon'ny 10 tanàna liveable indrindra eto an-tany (araka toMercer Human Resource Consulting).
Key Figures ao amin'ny Goethe University Frankfurt
Miisa 46,547 mpianatra dia voasoratra ao amin'ny Goethe University teo am-piandohan'ny ny ririnina enim-bolana 2014/2015. ireo, 9,453 dia enim-bolana voalohany mpianatra ary 7,302 ireo mpianatra iraisam-pirenenaavy eo ho eo 125 samy hafa firenena.
Ny oniversite dia nahazo eo ho eo 182 tapitrisa euros ny famatsiam-bola ivelany, ao anatin'izany ny fanohanana ara-bola eo ambany fanjakan'i Hesse Fanentanana ho amin'ny fampandrosoana ny Siantifika sy ara-toekarena Excellence (LOEWE).
miaraka 511 Alemaina vatsim-pianarana ary tanteraka ny 919,800 euro amin'ny fanohanana ny fanomezana, ny anjerimanontolo indray laharana lohany ho eo alemà oniversite ao ity sokajy ity.
In tanteraka, Goethe University Faly handray an-tsoratra 71 tapitrisa euros in fanomezana amin'ny fahazato taonan'ny taona.
Siansa ara-tsaina sy Fanatanjahan-tena
Roman Catholic Teologia
Faculty ny Linguistics, kolontsaina, ary Arts
Geosciences sy ny Géographie
Computer Science sy ny Matematika
mpikaroka, Simia sy ny Pharmacy
Goethe University naorina tao 1914 ho toy ny tsy manam-paharoa "olom-pirenena 'oniversite,"Mpanan-karena ara-bola amin'ny alalan'ny olom-pirenena any Frankfurt, Alemaina. atao hoe in 1932 rehefa afaka indray tao an-tanàna ny tompon-tany malaza indrindra, Johann Wolfgang von Goethe, amin'izao fotoana izao dia manana ny anjerimanontolo ny 38,000 mpianatra. Raha mijery ny fizotry ny tantaran'ny Goethe University, dia mazava fa ny folo taona farany dia namoaka fiovana manan-danja ho an'ny oniversite-ary fa misy ny mazava aloha vahana.
Rehefa heverina ny liberaly na ankavia andrim-panjakana, Goethe University dia angamba tena fantatra amin'ny anarana hoe ny toerana hahaterahan'ny Frankfurt ny pahefana Sekoly, ampahany amin'ny Institute for Social fikarohana-izay spawned sasany ny mpitarika Eoropa mpandinika ny 20thcentury (ao anatin'izany ny, ohatra, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Hans-Georg Gadamer, Martin Buber, ary Paul Tillich).
Noho ny poko sy ara-politika ny disadisa nandritra ny vanim-potoana nazia, manakaiky ny iray ampahatelon'ny akademika ny oniversite mpiasa nalefany nandritra izany fotoana izany, na oviana na mihoatra noho ny oniversite alemà hafa. Goethe University nilalao ihany koa ny toerana lehibe eo amin'ny hetsi-panoherana ny mpianatra 1968 izay nitarika ny fanavaozana-pampianarana niely patrana tany Alemaina sy manerana an'i Eoropa.
Goethe University dia foana ny laza ao amin'ny siansa ara-tsosialy
Tato anatin'ny taona vitsy lasa, Goethe University dia foana ny laza ao amin'ny siansa ara-tsosialy, fa zava-dehibe nanampy trano vaovao sy ny fikarohana Institiota ao amin'ny siansa momba ny zavaboary ary koa ny lalàna, tantara, fiteny, humanities, ny zava-kanto, sy ny toekarena. Ny 'sampahom-tena tsara ", interdisciplinary foibem-pikarohana, Nanampy hanasa ny oniversite akademika Profile, fanatrarana vokatra miavaka amin'ny faritra samihafa miainga amin'ny siansa voajanahary ("Macromolecular-be") ny fanafody ("Cardio-Pulmonray System", ny sampahom-fahatsarana eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Oniversiten'i Giessen sy ny Max Planck--Institute for Fo sy Lung Research in Bad Nauheim, izay mitondra sisin'ny nanapaka fikarohana ny tantara fitsaboana-po sy ny havokavoka aretina) sy ny siansa sosialy humanities ary ("Ny Formation ny Normative Filaharana").
Srongly nanao ny fanohanana ny tanora mpikaroka
Goethe University dia mafy nanao ny fanohanana tanora mpikaroka amin'ny alalan'ny fanomezana fahafahana miavaka mba hahazoana ny mari-pahaizana doctorat. Amin'ny anjerimanontolo maro, mpikaroka tsy maintsy misafidy eo amin'ny fitadiavam-bola ny PhD "nentim-paharazana" lalana any Alemaina, na izay tafiditra ao ny "voarafitra" Doctorat fandaharana. Ao amin'ny Goethe University, doctorat rehetra kandidà ireo dia mendrika ny hampiharana mba ho lasa mpikambana ao amin'ny Goethe Graduate Academy (Grade) ary fahafahana miditra tsy manam-paharoa sy ny tambajotra fampiofanana fahafahana izay ny mampiavaka ny fandaharana drafitra kokoa.
Farany, tokony hilaza ny oniversite ny fatra-paniry laza "no mihevitra fa fiara mifono vy": ny vao nanorina Frankfurt Institute for Fianarana (FIAS) ary ny Institute for Advanced Fianarana ny Humanities, izay mahita ny tenany ho toy ny laboratoara ho an'ny zava-baovao eo amin'ny fiaraha-monina ny fahalalana.
Ny oniversite ihany koa ny mpialoha lalana ao amin'ny "Bologna Process" izay nanampy mba hanamaivana mpianatra mivezivezy sy mivoaka mahery 40 Firenena Eoropeana amin'ny alalan'ny rafitra ambaratonga standardizing. manomboka amin'ny 2005, Goethe University nanomboka nanolotra ny tompony voalohany ny fandaharan'asa sy ny jiro avy ao amin'ny nentim-paharazana alemainadiplaoma na Magister ny mari-pahaizana licence sy ny rafitra tompony dia ho tanteraka ao amin'ny ririnina enim-bolana 2011/12. ankehitriny, Goethe University dia manolotra olona maro sy ny mari-pahaizana taranja fandaharana amin'ny teny Anglisy, fiovana lehibe iray hafa. Four tompony fandaharan'asa amin'ny toekarena ampianarina tanteraka tamin'ny teny anglisy, iray hafa dia fiteny roa (Alemà sy anglisy) fandaharana. Maro ny fandaharan'asa tompony ao siansa momba ny zavaboary koa dia nianatra tsy feno ny fahalalana ny teny alemà, ary ny doctorat ao amin'ny fianarana isan-karazany ihany koa ny saha Matetika dia nanoratra amin'ny teny anglisy.
Voalohany oniversite lehibe tany Alemaina ho lasa fototra oniversite
In 2001, ny oniversite no voalohany oniversite lehibe tany Alemaina ho lasa fototra oniversite, izay midika fa ny toe-Hessen dia mbola hanome famatsiam-bola mba handrakotra ny ankamaroan'ny teti-bola isan-taona fa ny oniversite dia ho afaka hanorina ny fanafiana masina sy mankafy miankina tanteraka amin'ny raharaha ara-panjakana fizakantena toy ny sampam-pianarana fanendrena. Goethe University izao manana fikambanana matanjaka Alumni ary nanangana € 145,5 tapitrisa (tsara ny fanoloran-tena tafiditra ao amin'ny kajy) ary namorona mihoatra noho ny 50 vaovao ny fanafiana masina sy ny fitsidihana professorships-lehibe famerenana hoy ny oniversite io koa fa "olom-pirenena 'oniversite".
Ny fanjakan'i Hessen dia vola mitontaly € 1.2 lavitrisa mba hanampiana mamorona toeram-pianarana marina tontolo Frankfurt telo miavaka tsara tianao: Campus Westend ho an'ny humanities sy ny siansa ara-tsosialy, Campus Riedberg for voajanahary siansa, ary Campus Niederrad ho fanafody. Ny teo aloha Bockenheim Main Campus, izay daty hatramin'ny nanorenana andro ny oniversite, dia tsy ho ampiasaina indray mandeha ny trano vaovao tanteraka.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Goethe University Frankfurt ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Goethe University Frankfurt amin'ny Map
Photos: Goethe University Frankfurt ofisialy Facebook
Goethe University Frankfurt Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Goethe University Frankfurt.